Anyanwụ na-amụkwasị anyị – Aghọ Aghụghọ Anya&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Akụkọ mmetụta uche sitere n'obi na-atụgharị uche na ahụike nke afọ iri na ụma na nsogbu mmekọrịta! "Anwụ na-enwu n'elu anyị" bụ egwuregwu akụkọ na-emetụ n'ahụ nke nwere nhọrọ na ọtụtụ njedebe na ụlọ akwụkwọ sekọndrị Indonesian..
Ị na-egwu dị ka Mentari, onye a na-achọsi ike bụ onye ka gafere ụlọ akwụkwọ ma na-agbalị ịgbake site na mmerụ ahụ ọ gara aga. N'egwuregwu ahụ, ị ga-enyere ya aka ime nhọrọ site na ndụ ụlọ akwụkwọ wee nweta ihe ndị na-agbanwe ndụ nke ga-emetụta ọdịnihu ya.
N'ụlọ akwụkwọ, enwere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ pụrụ iche, nke ọ bụla nwere ihe odide ha dị iche iche na neuroses. Enwere mkpụrụedemede atọ nke ụzọ platonic ọ bụla dabere na nhọrọ gị n'ime akụkọ ahụ dum.
🌻 Nnọchiteanya ahụike uche🌻
Na-egwu egwu dị ka Mentari, ị ga-eche ihu dị iche iche ihu nwere nghọta dị iche iche nke ahụike uche ma ọ bụghị naanị gị nwere nsogbu ahụike uche. Site na egwuregwu, ị ga-achọpụta nsogbu nke agwa ndị ọzọ ma ị nwekwara ike inyere ibe gị aka n'oge dị egwu!
🌻EMEGHỊ EGWU 🌻
Ị nwere ike megharịa egwuregwu ahụ wee chọpụta ihe nkiri ọhụrụ ị tụfuru mbụ – ihe ị tụfuru na mbụ, ị nwere ike ịhụ oge nke abụọ! Choosing different options might open different scene and mepee deeper conversations with different characters.
🌻 Onye ọ bụla nwere ike igwu egwu🌻
N'ihi na egwuregwu ahụ abụghị maka nka twitch, ọ na-enyocha akụkọ dabere na mmụta na ọmịiko. Ndị mmadụ na-anụ akụkọ mmetụta uche nwere ndị pụrụ iche ga-anụ ụtọ The Sun Shines Over Us.
• Akụkọ ya na 15 isiakwụkwọ, voltaji gafee 100.000 ọnụ okwu
• 6 njedebe dị iche iche
• 15 agwa ndị dị ndụ nwere 2 ụdị ejiji
• gafere 25 nzụlite mara mma
• BGM echefu echefu
• 31 CG mara mma ịnakọta n'ofe egwuregwu ahụ
• Nrọ ebighi ebi bụ otu ụlọ egwuregwu egwuregwu na Lampung, Indonesia.
• Egwuregwu Niji bụ ụlọ ọrụ mmekọ egwuregwu mbụ nke Indonesia.
Jikọọ anyị na mgbasa ozi ọha:
🌻 Ngwaọrụ kacha nta chọrọ 🌻
• Chipset: Snapdragon 450 ma ọ bụ dakọtara
• CPU: Quad Core 1.8 GHz ma ọ bụ otu
Daalụ maka igwu egwu!
← Egwuregwu mma agha! Ninja Slice Runner Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike Ebe nchekwa nwamba na ndị enyi anụmanụ&Mbanye anataghị ikike →